Inja Isondlo | Isilimela 2022
Ezinye iindlela zokutya kweZinja zoRhwebo
Udidi Inja Isondlo
Baninzi ngakumbi abathandi bezilwanyana zasekhaya abaphethukela kukutya okuzenzela inja kunokuba baqhubeke nokondla imixube ye-kibble yorhwebo. Fumana ukuba kuthatha ntoni ukulungiselela ...
Ngaba i-Rawhide okanye i-Beef Fihla i-Chews ilungele izinja?
Ngaba wakha wazibuza ukuba kukhuselekile na ukunika izinja zakho eluhlaza? Izinja ngokuqinisekileyo ziyazithanda, kodwa ii-vets kunye nabanini bezilwanyana ngokufanayo babonakala bohlulekile malunga nokuba ngaba ...
Ngaba iiBlueberries zikhuselekile kwizinja?
Unokuzibuza, 'Ngaba iiblueberries zikhuselekile kwizinja?' Umbuzo olungileyo kubanini bezinja abachaphazelekayo. Ayikuko konke ukutya okutyiwa ngabantu okulungele izinja. Abanye ...
Uninzi lwabanini bezilwanyana luyakuphepha ukutya kwenja okuqukethe ii-carbohydrate ezininzi. Ukuba ufuna iprotheni ephezulu kunye nokutya kwenja esezantsi, kuya kufuneka wazi malunga neendidi ...
Izinja kunye namathambo enkukhu
Zimbalwa izihloko zezilwanyana ezivelisa impikiswano eshushu nokuba uyayivumela inja yakho itye amathambo ekrwada okanye aphekiweyo enkukhu. Abanye abantu bathi kungokwemvelo ukuba izinja zitye ...
Iingcebiso zokwenza ukutya kwenja okuphekiweyo ekhaya
Ukwenza ukutya okuphekiweyo kwenja yindlela esempilweni kunye neyoqoqosho yokondla isilwanyana sakho. Uninzi lwabanini bezinja sele luqalile ukuphekela izinja njengendlela yokuthintela ingozi ...
Ukulumla abantwana ezinjana
Kuya kufuneka ufunde malunga neenja zokulumla xa intshontsho lakho lilindele inkunkuma. Ukulumla amantshontsho kuthetha ukuba uzisusa kancinci ekufumaneni ...
Izibonelelo zokutya kwenja yeswekile kunye nezikhokelo
Inja yeswekile izabalazela ukulawula iswekile esegazini. Inaliti ye-insulin yinxalenye ebalulekileyo yonyango, kodwa ukutya kukwadlala indima ebalulekileyo. Njengokuba kunjalo ...
Qhwalela ukutya kweZinja ezomileyo
Ukhe weva okuninzi malunga 'nokuthengisa' kunye 'nendalo' yokutya kwenja kwiinyanga ezidlulileyo, kodwa yintoni oyaziyo malunga nokutya okomileyo kwenja? Funda nzulu malunga ...
Ukuqala kweNjana ekutyeni okuQinisekileyo
Ukuqala iinjana kukutya okuqinileyo yinto ebalulekileyo ekukhuleni kwabo ngokomzimba kunye nokukhula ngokweemvakalelo kwinkululeko. Bancede bakhule babe sempilweni ...
Ukutya kweenja ezigqibelele kunye neeBrand
Okona kutya kokona kutya kufikelelekayo kuyafikeleleka, kunencasa eyonelisayo, kwaye kuqulathe umxube ophilileyo wezakhamzimba.
Isikhokelo kwiiProteni ezisezantsi zeProtheni yenja
Ukutya kwenja yeeprotein ezisezantsi kwenziwa kuzo zombini iintlobo ezomileyo nezinkonkxiweyo. Iprotein ingaphantsi kweprotein ekutyeni okuqhelekileyo kwenja kwaye ihlala icetyiswa ...
Ukutya oku-9 okuphezulu kakhulu kokutya kweenja
Ukutya kwenja enkulu kufuneka kusebenzise inyama yokwenyani, okanye ubuncinci ukutya okunamagama, njengomthombo wayo ophambili weprotheni. Kuya kufuneka isebenzise neendlela zendalo ukugcina ukutya ...
Amathambo aKhuselekileyo kunye nokuhlafuna izinja
Ngokungafaniyo nabantu abagcina amazinyo abo ecocekile ngokuxubha rhoqo, izinja zihlafuna amathambo ukususa i-tartar buildup kunye nenkunkuma emazinyweni. Amathambo awanelanga ...
Imithombo yeProteni yeeNja
Yeyiphi eyona mithombo ilungileyo yeeproteni ezinjeni? Ngamafutshane, oku kukutya okutyebileyo kwiprotein. Izinja zinokuba zi-omnivores, kodwa okunye ukutya ...
Ukunyanga izinja ezinamatye esinyi
Izinja ezithambekele ekuphuhliseni amatye esinyi zifuna ukuphathwa ngokusekwe kuhlobo lwelitye abanalo. Naluphina unyango olunika inja yakho kufuneka luncede ukunciphisa umngcipheko ...
Ngaba izinja kufuneka zityise iicashew?
Uninzi lwabanini bezinja bayathanda ukunika izilwanyana zabo unyango ngamanye amaxesha. Ngelixa iigobolondo zecashew zinokuba yityhefu enkulu, unganikezela ngesixa esincinci samantongomane ahleliweyo kwizinja ezininzi.
Ngaba Ukutya kweenja okuNgenaNkozo akulunganga kwintliziyo yenja yakho?
Ukutya kweenja ezingenazinkozo kuye kwathandwa kakhulu phakathi kwabanini bezinja abakholelwayo abakholelwa ukuba impilo kunye nokuphila kakuhle kwenja yabo kuluncedo ngakumbi kolu hlobo lokutya. ...
5 Izinketho zokutya okuPhezulu kweNja yokutya kweFibre
Ezinye izinja zifuna ifayibha eninzi ekutyeni kwazo kunokuba i-kibble ephakathi inokuhambisa. Nje ukuba ufunde ukuba kutheni i-fiber inokuba luncedo kwaye izizathu ...
Ikhekhe lokuzalwa leCake Recipes
Ngaba ufuna ukubetha ikeyiki yosuku lwakho lokuzalwa olulandelayo? Mphathe ngenkomo kunye nebhekoni, icarob kunye neminqathe, kunye neqabaka ekhethekileyo ayakuyithanda.
uziva njani u-kiss wokuqala
ukuphakama komndilili weminyaka eli-13 ubudala
Ngaba izihlangu zoqeqesho zingasetyenziselwa ukubaleka
Indawo yeminyaka yokuzalwa ye-13 yobudala